Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » anwụrụ ọkụ na-egbu egbu na-ekpu na Delhi ka emechara ememme Hindu
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
anwụrụ ọkụ na-egbu egbu na-ekpu na Delhi ka emechara ememme Hindu.
Delhi nwere ikuku kachasị njọ nke isi obodo ụwa niile, mana ọgụgụ Fraịde dị njọ karịa n'ihi na ndị bi n'obodo ahụ mere ememme Diwali, ememme ọkụ ọkụ Hindu, n'abalị Tọzdee.
N'ụtụtụ Fraịde, Index Ogo Ikuku nke India gbagoro, na-eru 459 dị ịtụnanya n'ọkwa 500.
Mmetọ ahụ dị na Delhi na Fraịde dịkarịa ala ugboro iri dị elu karịa mmetọ ahụ na London.
Ntinye uche nke ihe na-egbu egbu PM2.5, nke nwere ike ibute ọrịa obi na akụkụ okuku ume, tinyekwara ọkwa dị oke egwu.
Ndekọ ogo ikuku nke India gbagoro, rute 459 n'ọkwa nke 500 taa, na-egosi mmetọ ikuku 'siri ike' - ọnụ ọgụgụ kachasị elu edere n'afọ a.
Dabere na akụrụngwa ịntanetị, mmetọ ahụ dị na Delhi ọ dịkarịa ala ugboro iri karịa na London taa.
Ndị bi n'isi obodo India etetela n'ụtụtụ Fraịde ka ha hụ obodo ha n'okpuru mkpuchi anwụrụ ọkụ na-egbu egbu, mgbe ndị na-eme emume gbaghaara mmachibido iwu iji ọkụ ọkụ ka ọtụtụ nde mmadụ na-eme mmemme ọkụ ọkụ Hindu n'abalị ụnyaahụ.
Ntinye uche nke ihe na-egbu egbu PM2.5, nke nwere ike ibute ọrịa obi na akụkụ okuku ume, tinyekwara ọkwa dị oke egwu. Healthtù Ahụ Ike wa na-ewere ọkwa PM2.5 kwa afọ karịa microgram ise dị ka ihe na-adịghị ize ndụ, ma na Fraịde, obodo mepere emepe nde 20 hụrụ nkezi ọgụgụ obodo ya ruru 706 micrograms. Indian Express kọrọ na ọkwa PM2.5 tụrụ nnukwu microgram 1,553 n'elekere 1 nke ụtụtụ na Fraịde.
Foto nke Delhi na-akọrọ online show a ok smog ọcha na-ezu ike n'elu isi obodo, na visibiliti belatara nke ukwuu.
Delhi nwere àgwà ikuku kacha njọ n'isi obodo ụwa niile, mana ọgụgụ Fraịde dị njọ nke ukwuu n'ihi na ndị bi n'obodo ahụ mere ememme Diwali, ememme ọkụ Hindu, n'abalị Tọzdee. Ọtụtụ ndị megidere mmachibido iwu nke ọkụ ọkụ, na-agbakwụnyekwu uzuzu na-egbu egbu n'ikuku site na isi mmalite ndị na-adị ogologo oge.
Ọ bụ ezie na a kpachibidoro omume a nke ukwuu, ọkụ ahịhịa ahịhịa - usoro iji kpachapụrụ anya na-amụnye ọkụ n'ihe ọkụkụ furu efu iji kwadebe maka oge na-esote - na-enyekwa aka na ọkwa mmetọ ikuku na-egbu egbu n'oge a n'afọ. Oge Diwali na-adaba na nke ọkụ, dịka a na-eme ememe na njedebe nke owuwe ihe ubi okpomọkụ.
Dabere na SAFAR, Atụmatụ nleba anya nke ikuku n'okpuru nkwado nke Federal Ministry of Earth Sciences, ọkụ ahịhịa na-enye aka na 35% nke ọkwa PM2.5 Delhi.
Na Fraịde, ọ dọrọ aka ná ntị Delhi ndị bi ka ha ghara ime mgbatị ahụ ma zere ịgagharị. O kwuru na ihe mkpuchi uzuzu agaghị enye nchebe zuru oke ma dụọ ọdụ na ekwesịrị imechi windo niile na e kwesịghị ikpuchi ụlọ, kama mmiri mmiri.